Arch Linux inogumisa 32-bit mapakeji mune ayo ekuchengetedza | Linux Vakapindwa muropa
Arch Linux inogumisa 32-bit mapakeji mune ayo ekuchengetedza
Pakutanga gore rino isu takadzidza nezvechisarudzo cheArch Linux timu yekupa ne32-bit vhezheni pamwe ne32-bit mapakeji mune isiri kure kure ramangwana. Zvakanaka, iro risiri-kure-kure ramangwana rasvika uye Arch Linux yatanga kubvisa 32-bit mapakeji kubva kune ayo ekuchengetedza.
Izvi zvinoreva kuti vashandisi vane kuiswa kwe32-bit kweArch Linux kuchamira kugashira uye iwe haugone kuisa akawanda mapakeji uye zvirongwa kubva kune yepamutemo Arch Linux repositories.
Izvi zvinonzwika sesarudzo yakashata yevashandisi veArch Linux, asi hapana chingave chiri mberi kubva pachokwadi. Parizvino kune vazhinji vashandisi vane rutsigiro rwemabhiti makumi matanhatu nemasere, nekuti makomputa kubva makore gumi apfuura akange achitowirirana panguva iyoyo netekinoroji 64-bit. Saka chaizvo, mhinduro yedambudziko iri kune vazhinji kushandura kugovera kwavo kweiyo 64-bit Arch Linux.
Arch Linux 32, forogo yeavo vanoda Arch Linux uye iyo 32-bit chikuva
Chero zvazvingaitika, ichokwadi kuti dzimwe nzvimbo dzichine 32-bit michina uye hadzina mukana wekuchinja, senge Nyika dzeTatu nzvimbo. Imhaka yeizvozvo Arch Linux forogo ye32-bit yakagadzirwa, yakafanana vhezheni ichave iine yazvino Arch Linux asi ye32-bit chikuva michina. Iyi vhezheni yakadaidzwa Arch Linux 32. Arch Linux 32 haisi kugovera kutsva, asi vhezheni kana "yepamutemo kuravira" yeArch Linux zvimwe. Iyo Arch Linux 32 yekuisa mufananidzo inogona kuwanikwa pa iyo yepamutemo webhusaiti yakagadzirirwa chirongwa chakadai.
Asi zvese hazvisi nyore. Arch Linux, saGentoo, Debian kana Slackware, iko kugovera uko vashandisi vazhinji vanoshandisa sehwaro hwezvirongwa zvavo. Mapurojekiti ane 32-bit vhezheni, saka izvozvi, iwo mapurojekiti anosiya 32-bit kuvaka kana kushandisa Arch Linux 32, zvichiita kuti kukura kwavo kuve kwakaomarara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Arch Linux inogumisa 32-bit mapakeji mune ayo ekuchengetedza
Pane here nzira yekuenda kubva makumi matatu nematatu kusvika makumi matanhatu pane pasina kudzoreredza OS?
Mozilla ichapa $ 500K kuvhura sosi mapurojekiti
Iyo Steam mutengi inouya neshanduro inosanganisira kugadzirisa uye kugadzirisa